Aiseesoft Total Video Converter အလိုရှိသူများ အတွက် ~ ကိုစောဂျက်
Aiseesoft Total Video Converter အလိုရှိသူများ အတွက်
12:51 Ko Saw No comments
ကဲ မိတ်ဆွေများ အတွက် Aiseesoft Total Video Converter v4.0 ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သူက video ဖော်မက် တောတော့များများကို converter ပြောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါအပြင် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အပိုင်းလောက်ကိုပဲ တည်ဖြတ်ပြီး converter ပြောင်းလိုရပါတယ်။ ပြီးတော့ ဗီဒီယိုရဲ့ အလင်း အမှောင် ကိုလဲ ချိန်လိုရပါတယ်။ 7.MB ပဲရှိပါတယ်။ အလိုရှိသူ များ အောက်မှာ အဆင်ပြေတဲ့ လင့်ကနေ downloads ယူလိုက်ပါ။
downloads links 1 (ziddu)
downloads links2(mediafire)
Aiseesoft Total Video Converter ကို crack ဖိုင်နဲ့ ထည့်ထားတဲ့ အတွက် crack ထည့်နည်းကို အောက်မှာ ဖတ်ကြည်လိုက်ပါ။
၂။ ဖိုင်ထည်းမှာ ရှိတဲ့ ( crack ) ဆိုတဲ့ ဖိုင် ကိုဖွင့်လိုက်ပါ
၃။ (All.dll) ကို Copy ကူးလိုက် ပြီးရင်
၄။ ( C:\_Program Files\_Aiseesoft Studio\_Aiseesoft Total Video Converter\_dll ) မှာသွားပြီး Paste လိုက်ပါ
Confirm File Replace လို့မေးရင် တစ်ခုခုမေးရင်ပေါ့ ( yes ) ပေးလိုက်ရင်ရပါပြီး ........
Aiseesoft Total Video Converter ကို လုပ်နိုင်စွမ်းကို အောက်မှာ ဖတ်ကြည်လိုက်ပါ။
The Total Video Converter supports almost all popular portable devices such as PSP, iPod, iPhone, PS3, Zune, Creative Zen, Blackberry, Mobile Phone, iRiver, Walkman, Pocket PC etc. All conversions such as Convert Mod to MPEG, Tod to WMV, AVI to MPEG, WMV to MPEG, WMV to AVI, MKV to AVI, and MKV to MPEG，HD video to HD video are very easy and fast with the best quality.
mobile ဖုန်းများ အတွက် android games များ
Aiseesoft Total Video Converter အလိုရှိသူများ အတွက...
ဝင်ဒိုး 8 Activator အလိုရှိသူများအတွက်
Windows 8 Enterprise အလိုရှိသူများ အတွက်
Windows 8 aio16 in 1_iso အလိုရှိသူများ အတွက်
ဝင်ဒိုး 8 Activator အလိုရှိသူများ အတွက်
ကရင်ပြည်နယ် အလှ ပြက္ခဒိန် 2013 calendar
adobe photoshop cs5 စတင် လေ့လာလိုသူများအတွက် နှစ်သ...